AKHRISO: DF Soomaaliya oo ka hadlay Arrimaha ka taagan Galmudug.
July 18, 2019 NEWS 3
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ka codsaday bulshada reer Dhuusamareeb inay soo dhoweeyaan dadka ka qeyb galaya shirweynaha dib u heshiisiinta, maadaama ay gogosha taal magaala madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb.
Mr Kheyre ayaa sheegay in loo baahan yahay in waxgaradka reer Dhuusamareeb inay dadka wax tabanaya ay ugu tagaan meel walba iyo deegaanadooda, isla markaana u muujiyaan isu tanaasul.
“Maadaama aad idinka tihiin dadka fidinaya gogosha, waa in aad dadka soo dhoweysaan, waxaa la rabaa qof walba oo dhib sheegta inaad guryahooda ugu tagtaan, oo degmadooda aad ugu tagtaan oo aad ugu qancisaan tanaasulna u muujisaan”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Kheyre oo hadalkiisa u muuqday mid dareensan caqabadaha soo wajahay dadaalada dib loogu dhisayo Galmudug oo mideysan.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in aan la isku heysan in Dhuusamareeb ay tahay magaalo madaxda Galmudug, balse la isku heysto sida looga shaqeysan karo inay u ekaato magaalo madax loo siman yahay.
“La iskuma heysto in Dhuusamareeb ay tahay magaalo madaxda Galmudug, waxaa la isku heystaa malaga shaqeyn siin karaa, taasaa idinka la idinka rabaa, dad soomaaliyeed oo walaalihiina mustaqbalkooda uu ku xiran yahay idinka sida wax u ogolaatiin, idinka sida isugu tanaasushiin”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Kheyre.
mar kale tijaabin
VIDEO: Puntland oo ku eedaysay dowladda Somalia inay mas’uul ka tahay dhibaatada…
Nabadoon Jibriil,”Qolada ku celcelinaysa 91 ayaa la gaarayaa yeysan isku gowricin mindidii ay shalay nagu gowreceen”.
Duqa magaalada Garoowe oo beeniyey war lagu baahiyey baraha bulshada oo ku saabsan maamulkiisa.
VIDEO: Axmed Karaash oo isimada Puntland uga digey inay siyaasadda faraha la galaan.
DAAWO-Madaxweyne Deni oo jeediyey khudbad xasaasi ah weerarna ku qaaday hay’adaha fulinta maamulkiisa.
Kenya oo ka jawaabtey eedayn kaga timid dowladda Somalia oo ku aadan dagaalada Gedo.
Wasiir Bayle oo beeniyey in la fasaxay qaadka Miirowga sheegayna inuu ka hadlay Haareeriga Itoobiya.
Cabsi xoogan oo ka taagan magaalada Mandheera kadib dagaalkii Beledxaawo.
XOG: Madaxweyne Qoorqoor oo ka horyimid tanaasul loo sameeyo Puntland & Jubbaland.
DAAWO: Somaliland oo ka hadashay dilalka ka dhacaya Buuhoodle beenisayna inay iska horkeenayso beelaha.
Puntland oo si kulul uga hadashay imaanshaha wasiir Saleebaan Cali Koore ee duleedka Qardho.
VIDEO: Saleebaan Cali Koore oo gaarey duleedka Qardho kana bilaabay diiwan gelinta codbixinta doorashada Somaliland.
Wasiir katirsanaa Puntland oo xaalad caafimaad loogu qaaday Hargaysa ayaa ku geeriyoodey Burco.